Shiinaha Customized boorsada boorsadayaasha, Shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada dibedda > Boorsada Milatariga
1. Soo bandhigida alaabada boorsada milateriga:
(1) Inaad haysato boorso militeri oo lagu qanco waa riyada taageerayaal badan oo millatari.
(2) Boorsadeena Milatari waxay ka sameysan tahay dhar dhar heer sare ah. Dhammaan waxaa loogu talagalay iyada oo la raacayo darajada militariga, oo ay ku jiraan qaabdhismeedka, tiknoolajiyada dharka, xulashada qalabka, iwm.
(3) Kani waa shandad heer ciidan ah oo ku habboon hawdka, taas oo si fiican loogu qarin karo hawdka iyadoo aan cadowgu ogaan.
(4) Awood ballaaran ayaa hanan karta qalab badan. Shandaddan boorsada ah ayaa si wax ku ool ah u rarnaan karta iyadoo aan waxyeello lahayn oo waxay leedahay kalsooni weyn Markaad fulinayso hawlgallada, isku halaynta dhammaan qalabka waxay si gaar ah muhiim ugu tahay nolosha askarta.
(5) Shandaddan militariga ah looma adeegsan oo keliya ujeeddooyin millatari, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaalayaa rayidka. Waxay ku habboon tahay kaamam, fuulid dhagax, fuulid buur, socod iyo socdaal duurka ah.
(6) Dusha sare ee dharka ayaa lagu dahaadhay daahan biyuhu xireen, sidaa darteed boorsadan milatari waxay leedahay waxqabad heer sare ah, ha ahaato buuraha qoyan ama hawdka leh roob iyo sayax meel kasta. Boorsadan milatari waxay si fiican uga ilaalin kartaa waxyaabaha ku jira shandadaada in lagu qoyo biyo.
(7) Si loo wanaajiyo kalsoonida boorsooyinka milatari, waxaan u soo xulnay boorsooyin tayo sare leh iyo qalab lagu dhejiyo boorsadan milatari.
(8) Annaga oo tixgelinayna in boorsada milateri ay u baahan tahay in lagu raro waxyaabo iyo qalab badan, sidaa darteed culeyska ayaa ka badan, sidaa darteed waxaan u qaabeynay garabka garabka si loo yareeyo culeyska boorsada. Suumanka garbaha ballaaran ayaa si wax ku ool ah u kala diri kara awoodda, dadka isticmaalana ma dareemi doonaan daal markay isticmaalayaan boorsadan milatari.
2. Boorsada Milatariga product parameters (specifications)
3. Sidee loo doortaa shandad milatari oo wanaagsan?
(1) Qalabka dharka ee loo isticmaalo boorsooyinka milateri waxay leeyihiin astaamo badan, laakiin qaarkood ma ahan kuwo ku habboon dadka casriga ah. Si kastaba ha noqotee, dhab ahaan uma baahnid inaad ku qaadatid boorso goobta dagaalka, markaa uma baahnid ogaanshaha infrared, rasaasta, iyo astaamaha dabka aan dabka lahayn. Astaamahan aan la adeegsan waxay mudan yihiin in lagu daro culeyska xirmada.
(2) Marka boorsooyinka milatari loo isticmaalo nolosha, iska caabbintooda iyo iska caabbinta biyaha waa mid aad u xoog badan oo wax ku ool ah, laakiin waa in la ogaadaa in dharka badan ee u adkeysanaya dharka, uu sifiican u caabbinta biyaha, maxaa yeelay guud ahaan, iska caabbinta culeyska culus . Adag oo aan biyuhu oolin, ayaa sababi doona boorsada oo faaruq noqota.
(3) Isticmaalka cufnaanta sare ee maadada naylon ee 'CORDURA nylon' ayaa bixin karta saddexda faa iidooyin waaweyn ee xoogga boorsada, xirashada caabbinta iyo ka hortagga biyaha. Intaa waxaa dheer, maaddada dharka nylon CORDURA waxay leedahay muuqaal weyn oo aan sahlaneyn in la libdho oo leh midab aad u sarreeya oo midabkeedu sarreeyo; darajadu ma sareyso Dharka ayaa laga yaabaa inay sii libdhi karaan ama xitaa ku dheehan karaan waqti dheer iyo qorraxda. Kuwani waa xaalado aan loo baahnayn, sidaa darteed waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa tayada dharka marka la dooranayo.
(4) Waa maxay sababta badhamada boorsooyinka milatari ay qaas u yihiin? Boorsooyinka dhabarka ee dagaalka, marka lagu daro silsilado adag oo dhicitaan u adkeysan kara, cidhiidhiga guntimaha ayaa sidoo kale aad muhiim u ah. Haddii xirmo caadi ah la isticmaalo, waxay sameyn doontaa dhawaaq markii lagu ordo goobta dagaalka. Aad ayey khatar noogu tahay; iyo adeegsiga astaamahan boorsooyinka casriga ah waxay si weyn u kordhin karaan xoogga iyo xeeldheerida suunka.
(5) Boorsooyinka millatari ee inta badan laga buuxiyo waxyaabo kala duwan, isku duubnaanta jiinyeerrada sidoo kale waa mid aad muhiim u ah. Waa maxay faa iidooyinka ku jira isticmaalka jiinyeerrada waaweyn? Hadday boorsadu aad u buuxsan tahay ama barta soo-jeedinta U-qaabeeya ee sida caadiga ah laga helo boorsada, qabashada xoogga weyn ee jiinyeerka weyn ayaa si fudud u soo jiidan karaysa boorsada xaaladdan.
(6) Xeerarka militariga Shabakadda nidaamka Molle waxay abuureysaa muuqaal u gaar ah boorsada militariga. Nidaamka Molle wuxuu si wax ku ool ah kuu oggolaan karaa inaad buuxiso dhammaan noocyada agabyada loo baahan yahay, sida bacaha yaryar, boorsooyinka taleefanka gacanta, bacaha dhalada biyaha, muraayadaha indhaha, silsilado suran iyo wixii la mid ah.
(7) Si loo xoqdo boorsooyinka milatari si ay u qaadaan culeyska alaabada dibadda, habka tolidda dharka ayaa badanaa loo baahan yahay inuu noqdo mid aad u wanaagsan; gaar ahaan qodobka muhiimka ah ee u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho ayaa ah xiriirka ka dhexeeya xargaha iyo jirka boorsada, iyo boorsooyin milatari oo tayo sare leh waxay isticmaali doonaan Z-qaabeeya xoojinta soo noqnoqoshada, magaca saxda ah ee dharka waa Bartacks, oo loo yaqaan guntiin baabuurta warshadaha; qaabkan, Molle webbing ee boorsada milatari waxay qaadi kartaa culeyska agabyo kala duwan.
(8) Boorsada Milatarigas are usually not lightly packed. They must be able to share the weight of your shoulders and be comfortable enough to carry. From shoulder straps, backrest pads to buckles, you need to pay special attention. The width and thickness of the shoulder strap must be moderate in order to distribute gravity evenly. Shoulder straps that are too narrow or too flat can hardly support the heavy objects in the backpack.
5. Xirxirida iyo rarka boorsooyinka ciidanka
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 45cm X 30cm X 24cm, waxaan u habeyn karnaa baakadka naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 47cm X 32m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 15Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 13Kg.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadeyn doonaa baakadka boorsadan milatari iyadoo loo eegayo shuruudahaaga.
(9) Haddii aad u baahato shaybaarka shandaddan dhabarka ah, waxaan dooran doonnaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
Q5: Waa maxay wax soo saarkaaga wax soo saar badan?
(3) Waxaan nahay soo saare boorsooyinka milatari ee Disney, boorsooyinka Wal-Mart, iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Boorsada Milatariga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, la habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka